Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee James Milner Childhood Story Plus Ihe omuma ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Football Utility Master nke kacha mara amara na aha njirimara; "Jamie".
Anyị James Milner Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na eziokwu
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya bara na pitch mana ole na ole tụlere James Milner Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
James Milner Childhood Story - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
James Philip Milner mụrụ na ụbọchị anọ nke Jenụwarị 4 na Wortley, United Kingdom. A mụrụ ya nne ya, Lesley Milner (onye na-elekọta ụlọ) na nna, Peter Milner (onye nyocha ọtụtụ).
Milner nwere otutu onyinye dika nwatakiri. O doro anya na a ghọtara talent ya na football, egwuregwu, na ọsọ ọsọ n'oge ọ dị obere. Ọ na-egwuri egwu maka otu egwuregwu egwuregwu Yorkshire dị ka onye na-echekwa wicket.
Nakwa dịka nwatakịrị, ọ bụkwa onye mmeri nke mba na-agba ọsọ na onye na-agba ọsọ n'etiti gbakwunyere agbakwunyere. Ndị a na-eto eto mepụtara ụzọ dị mma maka ndị na-agba egwu na-arụ ọrụ nke nwere nkasi obi na nku abụọ na ebe ọ bụla ọzọ na pitch.
Ọ nọchitere anya ụlọ akwụkwọ ya na egwuregwu ndị a ma gbaa bọọlụ maka ndị otu egwuregwu amateur. Milner gbara ọtụtụ bọọlụ nwata maka Westbrook Lane Primary School na Horsforth ebe ọ gụrụ akwụkwọ.
Dị ka otu n'ime ndị na-agba ọsọ ọsọ na ụlọ akwụkwọ ya, onye ọ bụla maara na ọ ga-eme ka ọ bụrụ nnukwu egwuregwu. Milner hụrụ Graeme Coulson, onye nchịkwa si Rawdon. Ọ ghọtara talent Milner wee mee ka ọ kpọọ Rawdon n'ọtụtụ asọmpi.
Nke a bụ ebe Milner meriri ihe mgbaru ọsọ anọ na mmeri ha n'otu n'ime njedebe. Ihe dị n'oge a mere nke ọma maka ya. Nke a bụ oge ọ meriri nrite maka “klas mbụ”Nwata akwụkwọ n’ụlọ akwụkwọ ya. Ọ gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ya na 11 GCSEs na onyinye maka arụmọrụ ya na agụmakwụkwọ anụ ahụ.
N'agbanyeghị ịgba bọlbụ onye amateur nọ na elu ya, ihe niile Milner chọrọ n'oge ụfọdụ bụ ka ọ bụrụ ndị egwuregwu bọọlụ ọkachamara. Ọ kwadoro ụlọ ọrụ obodo ya Leeds United site na nwata. Ihe ncheta mbụ ọ chetara banyere ndị na-eduga na-ele ha ka ha merie iko ndị ntorobịa FA na 1993.
Ya na ndị mụrụ ya, Peter na Lesley, bụ ndị ji tiketi oge. Graeme Coulson onye na-amụrụ ya bọọlụ nyere ya aka itinye aka dị ka nwa bọọlụ maka ọgbakọ tupu ya abanye n'otu ndị ntorobịa ha ịmalite ọrụ ya.
Na Leeds Academy, Eddie Gray bụ nnukwu mmetụta, ọ bụ ezie na ọ bụ Terry Venables na-egwu Milner na ndị otu mbụ na 16. Nke ahụ dugara na mkpebi nke onye nọ n'afọ iri na ụma iji zere mmanya. “Apụghị m ị drinkingụ mmanya n'ihi na ọhaneze mara m mgbe m banyere n'òtù egwuregwu mbụ pụtara na mmadụ niile maara afọ ole m dị”.
Ọ chọpụtakwara na ọ nwere ike ịbụ ihe mgbochi na-enwe ọganihu. Ọ na-ahụ akụkọ ndị na-adịghị mma ma mara nnukwu onyinye ndị ahụ Adriano kalama ahụ bibiri.
Ọ bụ n'afọ 2002 ka ọrụ ọrụ ya malitere. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Amy Fletcher? James Milner Nwunye:
James Milner nọ na Amy Fletcher tutu ya amalite igwu egwu ma ọ bụ chee na ọ ga-aba ọgaranya.
James na-ekwusi ike izute Amy n'oge ọ bụ nwata mere n'ezie ka ọ nwee ọgaranya!. Kaosinadị, n’abalị ahụ, n’oge ahụ ha gafere anya, nrọ ya nile mezuru. Ọ bụghị onye na-akwado ọhụụ. Ka ọ dị ugbu a, di na nwunye na-enwe obi ụtọ n ’alụ di na nwunye. Mmekọrịta dị n’etiti ha abụghị nkewa.
Amy Fletcher bụ maka James ịbụ teetotal. Ọ dịghị a drinksụ mmanya mgbe ọ na-anwale Strongbow nna ya n'oge ọ bụ nwata. Dị ka nwunye ọ bụla na-eguzosi ike n'ihe ma na-enye nkwado nke na-enwe mmasị ịhụ di ha na-enwe ọganihu. James Milner nwunye Amy Fletcher na-akwado ya nke ukwuu.
Ọ bụkwa ụbụrụ n'azụ Jems ịbụ onye na-enye nkwado. Di na nwunye ahụ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ebere "The James Milner Foundation" nke na enyere aka n'ichebe ahụike na ọganihu nke mmụta n'etiti ndị na-eto eto na United Kingdom site na nkwado ego.
E wezụga ọrụ football ya, James Milner nwere mmasị igwu golf. Ọ bụ ezigbo enyi ya na ibe ya, Jordan Henderson. Ọ ruru afọ 31 ugbu a. Ọ nwere elu nke 1.75m ma nwee ogo nke 70 n'arọ. Di na nwunye ahụ nwere nwa mbụ ha n'afọ 2015.
James Milner Ndụ Nke Onwe:
James Milner nwere ụdị àgwà ndị a.
Ike James Milner: Ọ bụ onye ọrụ, ịdọ aka ná ntị, nwere njide onwe onye dị ukwuu na ikike nke ịbụ ezigbo njikwa.
James Milner adịghị ike: Mgbe ụfọdụ, ọ na-azọrọ na ọ maara-ya-niile. N'ikwu ya, o nwere ike ịbụ onye na-enweghị mgbaghara ma na-eweda onwe ya ala.
Ihe James Milner nwere mmasị: Ezinụlọ, ọdịnala, egwu, ọnọdụ na-edozi anya na nkà
Ihe James Milner na-achọghị: Ọ nwere ike ime ihe dị ka chameleon. Mmiri Milner nwere ike ibilie otu ụbọchị, ọ dịghịkwa amasị ya ka ọ bụrụ ihe niile n'oge ụfọdụ
James Milner, na nchịkọta, bụ onye nwere ọnọdụ nke onwe ya nke na-enyere ọganihu dị ịrịba ama aka na ndụ ya. Ọ bụ onye nwe njide onwe ya ma nwee ikike ịmalite ụzọ, mee atụmatụ siri ike na nke ziri ezi, ma jikwa ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ maka ya n'oge ọ bụla.
James Milner Ndụ Ezinụlọ:
N'ịbụ nwa nwoke nke onye na-enyocha ọtụtụ nna na ezigbo nne na-ahụ maka steeti, James Milner maara na ọ ga-esite na ezinụlọ dị n'etiti na etiti tupu a kwụọ ụgwọ ịgba bọọlụ.
Ndị nne na nna a bi na obere obere okwute na-agba ọsọ na Horsforth cricket, egwuregwu ọzọ, yana egwuregwu, nke James maara nke ọma.
Ndị mụrụ ya, Peter na Lesley, bụ ndị ogologo oge Leeds n'oge ndị na-eji tiketi, tinyere James na ndị ezinụlọ ndị ọzọ. "M na-agwa nne m na papa m banyere ụlọ ịgba egwu, na nwanne nna m na ndị di m niile bụ ndị Leeds buru ibu,"
Milner na-ekwu. Hụnanya ha maka Leeds United gbanyere mkpọrọgwụ. Nna James Milner, Peter Milner bụ onye na-ekwusi ike mgbe niile na nwa ya nwoke James na-aga mahadum otu ugboro n'izu iji gaa n'ihu agụmakwụkwọ ya kama ịmalite ịgba bọl oge niile.
Maka agbamume ha niile, ndị agha Milit hụkwara mkpa maka ndụ karịa egwuregwu. "Ọ dịghị mgbe m chọrọ maka akpụkpọ ụkwụ," James kwuru, sị, Anyị bikwa n’otu ụlọ mara mma nke mara mma. Ma, papa m na mama m gbara m ume, ma n’ụlọ akwụkwọ. Ebe ọ bụ na ọ nweghị nkwa ọ bụla na m ga-eme, ha jidere n'aka na m nwere nhọrọ ma hapụ ụlọ akwụkwọ nwere 11 GCSEs, ọtụtụ n'ime ha ọkwa A. "
Inwe akwukwo dika ihe bu ihe bu ihe kpatara ya mgbe Milner Snr kwere ka obere James Milner nwee oke olu nke nwa nwoke obi uto maka Leeds United. Milner agadi bụ ezigbo ndị na-agba ọsọ onwe ya yana ezigbo ndị na-agba ọsọ. H
nwa na-echeta: “Mgbe m dị ihe dị ka afọ 10 ọ gwara m ka m na-eme ihe dị na aka ekpe m dịka aka nri m. O kwuru na ndị egwuregwu niile kachasị mma nwere ike iji ụkwụ ọ bụla. Ọ bụ ezigbo ndụmọdụ. ”
James Milner Untold Biography Eziokwu - Onye Okike Ya na Ochie Ochie:
Mgbe Milner na-eme egwuregwu megide ndị ha na ha dịkọrọ ndụ site na klọb ndị ọzọ dị n'ebe ugwu, tinyere Wayne Rooney na-atụ egwu Manchester United n'ọdịnihu. Onye nlereanya ya bụ Leeds mụrụ Alan Smith, onye bụ mgbe ahụ Leeds United striker.
Milner kwenyere na Smith na-egwuri egwu na-etinye ya n'ọmụmụ ihe mmụta, dịka Smith mere ihe Milner chọrọ iji mee; nke ahụ bụ, ịbịa site na agụmakwụkwọ na egwu maka ìgwè mbụ.
James Milner nwere ọgụgụ isi:
Akụkọ ndị na-adịbeghị anya na-egosi na James Milner gụsịrị akwụkwọ mbụ ya site na mmụta dị anya.
Dịka nwatakịrị na ọbụna ruo ụbọchị, James Milner bụ ọkachamara mgbakọ na mwepụ na enwere eriri ndị ọzọ na ụta ya. Ọ gaara aga mahadum dị elu wee nwee akara mahadum. Ọ dị larịị, ọ naghị adị mpako ma nwee ihu ọchị.
Otu n’ime ihe ndị kacha mma banyere ya bụ na ọ dịghị etu ọnụ banyere ihe ọ na-eme ma ọ bụ ebe ọ na-aga. Had ga-ajụrịrị ka ị chọpụta. Omume ya mere ka mmadụ niile mara ya.
Ndị mmadụ na agba bọọlụ na-agwa ya ka ọ bụrụ onye isi ndị England n’ọdịnihu, ọ tụghị anyị n’anya. O nwere àgwà onwe ya ma bụrụ ụdị ọrụ na-arụ ọrụ na egwuregwu ya dị ka David Beckham mere.
Dịka onye nkuzi, ị na-atụ anya mgbe niile na nwa akwụkwọ ga-emezu ikike ha. N'ọnọdụ James, ọ dịghị mgbe o doro anya. O nwere ike ahụ na mkpebi siri ike ahụ, mmegide a na-achịkwa nke na-eme ka ndị mmadụ gaa n'elu.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị James Milner Nwatakịrị Na-akọ akụkọ ọzọ akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.